Banyere Antigua & Barbuda | Amaala Antigua na Barbuda
Banyere Antigua & Barbuda
Antigua na Barbuda Passport
Nchedo data & Iwu Nzuzo
Usoro nhazi ego
Akwụkwọ ikike anyị
Antigua na Barbuda bụ obodo ejima nke dị n'agbata Oké Osimiri Caribbean na Oké Osimiri Atlantic. Ọ mejupụtara agwaetiti abụọ bụ́ isi mmadụ bi na ya, Antigua na Barbuda, na ọtụtụ agwaetiti pere mpe.
Gọọmentị: Ọchịchị Federal, usoro ndị omeiwu
Isi obodo: John John
Koodu ọkpụkpọ: 268
Mpaghara: 443 km²
Ego: Ụsọ Oké Osimiri Caribbean
Antigua na Barbuda bụ steeti Commonwealth nọ na Eastern Caribbean. Christopher Columbus bu ụzọ mata Antigua na 1493 ma mesịa bụrụ onye ndozi Britain. N’okpuru Onye-isi-nwe Nelson, ọ bụụrụ isi ndị agha mmiri dị na Britain site na ya na-elekọta ya na West Indies.
Antigua bụ 108 sq kilomita ma ọ bụ 279.7 sq km, Barbuda bụ 62 sq kilomita ma ọ bụ 160.6 sq km. Antigua na Barbuda jikọtara bụ 170 sq kilomita ma ọ bụ 440.3 sq km. Antigua na uzo ihe eji eme ya ka nma ka emeputa nkpuru mbu nke anwuru, nkochi na akwa. Howeverlọ ọrụ bụ isi tolitere n'ime ahịhịa okpete nke dịruru ihe karịrị narị afọ abụọ. Taa, na nnwere onwe ya afọ iri atọ site na Britain, isi ụlọ ọrụ Antigua bụ njem na ọrụ ọrụ metụtara ya. Ndị ọzọ na-ewe mmadụ n'ọrụ bụ ụlọ ọrụ ego na gọọmentị.
Antigua na Barbuda bu usoro ochichi iwu nke nwere usoro ochichi ndi ochichi ndi Britain. Nwanyị nwanyị nwere onye nnọchi anya ya, onye isi ọchịchị họpụtara, onye na-anọchi anya Nwanyị dịka Onye isi ala. Ihe mejupụtara Gọọmentị ahụ bụ ụlọ abụọ: ndị otu 17 na-anọchite anya ndị otu na-anọchite anya ya, nke Prime Minista na-eduzi; yana ndi otu Senate 17. Ndị isi otu Senate họpụtara mmadụ 11 n'ime ndị isi oche n'okpuru nduzi nke Prime Minista, a na-ahọpụta mmadụ anọ n'okpuru nduzi nke Onye Ndú Onye Mmegide na abụọ site na Gọvanọ General. Ndi isi nhoputa ndi ochichi ka enyere aka n’afọ ise obula ma apia ikpo ya ndi mbu. Courtlọ ikpe dị elu na ụlọ ikpe mkpegharị ikpe bụ Courtlọikpe Kachasị Eshia na Eastern Court Court na London.
N'ịbụ ndị nwere nnukwu mmiri pọpọpọ mmiri dị ọcha 365, Antigua na Barbuda nwere agwaetiti na-ekpo ọkụ bụ ebe a na-akpọ paradise ma na-ewere ya dị ka otu n'ime ebe kachasị mma n'ụwa. N'ihi ya, ime njem bụ sọsọ dị mkpa maka GDP ma na-ebute ihe dị ka 60% nke ego agwaetiti ahụ, nke bụ isi ahịa bụ US, Canada na Europe.
Antigua na Barbuda enwetawo ọnọdụ akụ na ụba na-ama aka na afọ ndị na-adịbeghị anya. Agbanyeghị, gọọmentị kwenyela na gọọmentị na ntinye ya nke Atụmatụ Mgbanwe Ọha na Ọha na Ọha na Mgbanwe Mkwụghachi ụgwọ. Otu n'ime atụmatụ iji kwado akụ na ụba mba agwaetiti ahụ bụ iwebata ụmụ amaala site na Mmemme Etiti.
Egosiri mbọ Antigua na Barbuda na ijere ụlọ ọrụ njem njem ya ma na-abawanye GDP ya bụ mmezu nke ọrụ mgbasawanye ọdụ ụgbọ elu. Ọ dị ihe dị ka nde US $ 45 ma gụnye àkwà mmiri jet atọ na ihe karịrị ọnụọgụ iri na abụọ na-enyocha, na-eke arụmọrụ kachasị elu maka mbata ndị njem. Ọ ga-emekwa ka e nwee mmụba nke ụgbọ elu, usoro isiokwu ụgbọ elu na etiti agwaetiti. Enwere ụgbọ elu ebidola gaa Antigua si London, New York, Miami na Toronto ebe.
Ndị bi na Antigua na Barbuda na-erite uru site na enweghị ụtụ isi ma ọ bụ ụtụ ala. Taxestụ ụtụ isi na - abawanye na 25% ma maka ndị na - abụghị ndị bi na ya, ha dị ọnụ ahịa pacenti 25%. Ndozigharị a ga-eme ka akụkụ nke 111 Nke 5 nke Iwu Income Tax ga-agbanwe ụtụ isi na ego zuru ụwa ọnụ gaa na ụtụ isi na ego sitere na Antigua na Barbuda.
Ego ahụ bụ dollar Caribbean Caribbean (EC $), nke atụpụrụ anya na US $ na 2.70 EC $ / US $. Antigua na Barbuda bụ onye otu United Nations (UN), British Commonwealth, Caricom na Organisation nke America States (OAS), n'etiti ọtụtụ ndị otu mba ụwa. Ndị jidere Antigua na Barbudan paspọtụ na-enwe obi ụtọ njem njem gaa mba 150, gụnyere United Kingdom na mba ndị dị na mpaghara Schengen. Ndị jidere paspọtụ a, dị ka mba ndị ọzọ niile nke Caribbean, chọrọ visa ka ha banye na US n'ihi na ha abụghị onye so na Mmemme Visa Waiver.
ỌR AD AAAA • CIU & CIP & CBIU & CBI AGENT
Citizensmụ amaala nke abụọ na akwụkwọ ikike ngafe nke ndị gọọmentị mbata maka ọpụpụ • hipmụ amaala nke St. Kitts • Citizensmụ amaala nke St. Lucia • Amaala Antigua • Citizensmụ amaala Grenada • Citizensmụ amaala nke Dominica
Arthur Evelyn Building Charlestown, Nevis, St. Kitts na Nevis
Amaala Antigua na Barbuda njikọ ngwa ngwa:
Akwụkwọ ikike ngafe & Visa
Nkwupụta ọnwa 6 maka CIP - 1st July 2019 - 31st December 2019
© 2020, Amaala Antigua na Barbuda Kwadoro site na Shopify